Bogga ugu weyn 20 Horumariyaha Shabakadda Lacagta Ugu Badan Bixiyay | Dalalka Ugu Fiican
Weligaa ma ku fikirtay sida shabakadaha loo naqshadeeyo? Sidee loo bar -bar dhigaa? Waa maxay Farsamada ama softiweerka loo isticmaalo in lagu xakameeyo codsiyada mareegaha? Sidee kaliya u gujin kartaa mashiinka raadinta si aad u furto degel? Waa hagaag, wax walba waxaa lagu sharxi doonaa si faahfaahsan.
Maqaalkani waxa uu ka kooban yahay dhammaan kuwan iyo kuwa ugu mushaharka badan soo-saareyaasha shabakadda ee adduunka.
Waa Kuma Soo Bixiyaha Webka?
Horumarinta Shabakadaha Ma Lacag Badan baa La Siiyaa?
Maxaad U Noqonaysaa Horumariyaha Webka?
Sidee Hormariyayaasha Webka iyo Barmaamijyadu Lacagtooda u Sameeyaan?
Intee in le'eg ayay Sameeyayaasha Webka Sameeya?
Waa kuwee Horumariyaha Shabakadda Lacag -bixinta ugu Badan?
Waa kuwee Wadamada ugu Lacag -bixinta Badan Websaydhayaasha ama Barnaamij -yaqaanka Adduunka?
10 -ka Barnaamij -yahan ee Ugu Mushaarka Badan Adduunka
8. Satoshi Nakamoto
9. Markus Persson
10 Robert Nay
​​​​​Soo -saareyaasha webka waxay xaq u leeyihiin Horumarinta, naqshadeynta mareegaha, sameynta aragti wanaagsan oo ku saabsan astaamaha dalabka iyadoo la adeegsanayo softiweer, Teknoloojiyadda Webka, iyo luqado barnaamijyo badan.
Noqoshada horumariyaha webka waxay qaadataa xirfado badan maadaama xirfadda ay ku lug leedahay la tacaalidda dhinacyada farsamada iyo hal -abuurka teknolojiyadda webka.
Waa kuwan qaar ka mid ah xirfadaha lagu barto si aad u noqoto horumariyaha webka.
Xirfadaha Isgaarsiinta iyo Dadka
Xirfadaha HTML/ CSS
Aqoonta badan ee aad ku leedahay goob gaar ah, ayaa sare u qaadeysa mushaarkaaga.
Haa, Soo -saareyaasha Shabakaddu waxay ka mid yihiin shaqooyinka ugu sarreeya khadka tooska ah ee adduunka, iyagoo haysta mushaharka ugu sarreeya iyo joogitaanka korodhka xooggan ee xilligii teknolojiyadda.
Ahaanshaha horumariyaha webka wuxuu soo jiitaa gunno badan oo dheeri ah, xirfado la horumariyo, iyo sidoo kale fursado shaqo.
Ku -takhasusidda meheradda caadiga ah ee xirfaddaada kuma filna. Haddii aad ku dhegto xirfaddaada adigoon ku biirin xirfadaha kale, waxaa laga yaabaa inaad ku dambaysid inaadan helin xirfadihii loo baahnaa ee aad ka heli lahayd goobtaas gaarka ah.
Horumarinta Shabakaddu waa xirfad weyn oo loogu talagalay kuwa doonaya inay ka gudbaan adduunka Farsamada.
Laamaha Horumarinta Shabakadda ee dhammaan xirfadaha, xirfadaha. Waxay u sahlaysaa qofka la shaqeeya inuu awood u yeesho inuu u dhaqmo si caqli leh iyo waliba inuu noqdo mid xikmad leh.
Akhri: 10 Injineerada Software -ka Ugu Lacagta Badan Adduunka | 2022
Soo -saareyaasha iyo Barnaamij -sameeyayaasha waxaa loo yaqaanaa xallinta dhibaatooyinka oo sidoo kale waxaa badanaa loo maleeyaa inay yihiin xirfadda kaliya ee awood u leh inay dabciyaan muruqyadooda. Inaad noqoto Horumariyaha Webka ama Barnaamij -sameeye waxay qaadataa dhammaan faa'iidooyinka, kartida hal -abuurka iyo inay kugula tacaasho kheyraadkaaga weyn, oo ah waqtiga.
Inta badan Web Developers -ka ayaa ah Freelancers lacagtooda ka hela ilo u baahan adeegyadooda iyagoon soo marin maylka dheeraadka ah ee shirkadaha Teknolojiyada ee raadinaya shaqooyinka.
Adigoo ah Horumariyaha Shabakadda, waxaad siyaabo badan lacag ugu samayn kartaa Haddii aad taqaanid waxa sameeya oo aadan ku jirin xirfadda. Sidoo kale, xirfadahaaga, heerka khibradaada ayaa go'aamiya mushaarkaaga.
Heerka gelitaanka ama Bilowga Shabakadda Horumarinta ee leh khibrad sannadeed ma filan karto wax ka yar $ 150.
Soo -saareyaasha webka ayaa baahi weyn loo qabaa. Xawaaraha ay horumariyayaashu sii kordhayaan waa mid laga naxo.
Soosaarayaasha leh 5 ilaa 10 sano oo khibrad u leh mushaharka ayaa gaaraya $ 1000– $ 5000 sanadkiiba, Halka xirfadleyda ay kasbadaan lacag u qalanta kumanaan doolar sanadkii.
Soo -saareyaasha Xirmooyinka Buuxa ayaa ah kuwa ugu sarreeya ee horumariya webka iyo barnaamijyada.
XIDHIIDHKA: 10 Laanta Milatariga ee ugu Mushaarka Badan 2022
Noqoshada Horumariyaha Webka micnaheedu maahan inaad u kasbato si la mid ah sida ay saaxiibbadaada kale u helaan. Waxyaalaha sidaan u saameynaya waa xirfado iyo khibrad goobta.
Iyada oo celcelis ahaan mushaharkeedu yahay $ 106,000, Soo -saaraha xidhmooyin buuxa wuxuu u baahan yahay khibrad badan.
Ma aha qof kaliya inuu noqon karo Hormariyaha Shabakadda isagoo aan soo marin marxalado waaweyn. Heerka khibradda looga baahan yahay arimahan ayaa ka badan inta looga baahan yahay meelaha kale.
Waxay sidoo kale mas'uul ka yihiin mas'uuliyadda mashruuc haddii ay dhacdo in la waafajiyo, dalabka iyo sahayda Macaamiisha, waqtiga waqtiga mashruuca, bay'ada ayaa ka mid ah sababaha horumariyayaasha webka iyo barnaamij -yaqaanka ay yihiin kuwa ugu mushaharka badan.
Iyada oo ku saleysan sida ay u maareeyaan teknoloojiyadooda, dalalku waxay ku kala duwan yihiin kororka kheyraadkooda, la qabsiga horumariyeyaasha, iyo sidoo kale qaababka ay u shaqeeyaan.
Halkan waxaa ah liiska Wadamada bixiya lacagta ugu badan adduunka.
5 -ta Waddan ee Lacag -bixinta ugu sarreeya ee loogu talagalay soo -saareyaasha webka iyo barnaamijyada
Dalka. Mushahar Sanadeed
Switzerland. $ 63,546
Australia. $ 52,717
USA $ 50,900
Denmark. $ 47,775
Jarmalka. $ 45,108
5 -ta Dal ee Ugu Mushaharka hooseeya
Hindiya. $ 4,605
Indonesia. $ 5,347
Masar. $ 6,912
Kenya. $ 9,467
Argentina. $ 10,917
Xogta laga soo ururiyay hongkiat
Mushahar celcelis ahaan ah $ 63,546 Switzerland ayaa lagu yaqaanaa inay si wanaagsan u siiso shaqaalaheeda. Si kastaba ha ahaatee, shaqo helidda ma ahan wax sahlan Switzerland gaar ahaan Haddii aad tahay ajnabi.
Shirkadaha dalka ayaa raadinaya Barnaamij -yaqaanno leh 4+ sano oo waayo -aragnimo ah.
Shaqada ugu horreysa ee aad ku heli karto Horumar ahaan waa inaad noqotid Injineerka Software -ka Junior oo leh mushahar faham leh.
Mushahar sanadle ah oo ah 100,000 CHF waad ku fiicantahay inaad tagto.
Soosaarayaasha webka Swizz waa barnaamij -yaqaanka ugu mushaharka badan adduunka.
Soo -saareyaasha Webka ayaa ugu weyn darawalada internetka. Waxay yihiin dhisayaasha hubiya in Internetku leeyahay Shaqooyin gaar ah.
Celceliska mushaharka Soo -saaraha Webka ee Australia waa $ 60,290. Tani waxay ku xiran tahay xirfadaha iyo waayo -aragnimada aad leedahay.
Iyada oo celcelis ahaan mushaharkeedu yahay $ 73,760, Soo -saareyaasha Shabakadda waxaa loo tixgeliyaa xirfadlayaasha ugu mushaharka badan adduunka.
Tallaabooyinka lagu noqdo Developer Web ee dalal kale kuma kala duwan yihiin Mareykanka.
Iyada oo celcelis ahaan Mushaharku yahay 343,817kr/sannadkii, Soo -saareyaasha Webka ee Danmark waxaa lagu daaweeyaa iyadoo lagu saleynayo xirfaddooda iyo waayo -aragnimada sannadaha.
Horumariyaha Shabakada bilowga hore leh khibrad ka yar 2 sano wuxuu kasbadaa ilaa 150,052kr oo ku saleysan 5 mushahar. Mushaharka sanadlaha ah waa 477Kr – 475kr bishii.
Mushaharka Celceliska £ 41,010/sanadkii, Soo -saareyaasha Webka ee Jarmalka waxaa lagu yaqaanaa kalsoonidooda, la -xisaabtanka, iyo hal -abuurka xagga farsamada.
Soo -saareyaasha Shabakadda waxaa loola dhaqmaa si ka wanaagsan waddamada kale ee ka soo jeeda Mareykanka.
Tartan ayaa had iyo jeer loo baahan yahay marka shaqo laga codsanayo Jarmalka
Iyada oo celcelis ahaan mushaharka sanadlaha ah ee RS 300,000, qodobbada saameeya mushaharka Soo -saareyaasha Webka ee Hindiya waa goobta, xirfadaha, iyo khibradda.
Soo-saareyaasha Shabakadda bilowga ah waxay filan karaan RS 1,17500 halka khibraddu ay filan karto RS 8,50,000.
XIDHIIDHKA: 20ka Shaqo ee Collar Buluugga ah ee ugu mushaarka badan
Waxay ka mid yihiin waddammada ugu horumarsan Shabakadaha Lacagta Adduunka.
Celceliska mushaharka sanadlaha ee Horumariyaha Shabakadda ee Indonesia waa RP 57567926. Soo -saareyaasha Webka ee Indonesia waxay kasbadaan 12,100,000lDR bishii.
Waxay ku raaxaystaan ​​faa'iidooyin badan marka laga hadlayo guriyeynta, gaadiidka, caafimaadka, iyo kuwa kale. Si fiican ayaa loo ixtiraamaa.
Akhri: Shaqooyinka IT -ga ee ugu Lacagta Badan Adduunka | 10ka Xirfadood ee IT -ga ugu sarreeya sanadka 2022
Mushahar celcelis ahaan ah EGP6,200, celceliska mushaarka saldhiggu waa qiyaastii EGP5,000.
Soo -saareyaasha Webka waxaa lagu yaqaanaa kartida ay u leeyihiin in shaqooyin la qabto sidoo kale heerkooda waayo -aragnimo waa aag loo baahan yahay marka shaqo laga codsanayo Masar.
Mushaharka aasaasiga ah ee Ksh305,209 ee ku saabsan 15 mushahar, Horumariyeyaasha Webka ee Kenya waxay u baahan yihiin xirfado badan iyo sidoo kale heerka khibradda ee internetka.
Celceliska mushaharka sanadlaha ee Magdhawga waa Ksh432,000 oo ku saleysan 42 mushahar.
Mushaharka celceliska sanadlaha ah ee Horumariyaha Webka ee Argentina waa qiyaastii ARS72,789 bishiiba.
Adigoo ah Horumariyaha Argentina, waxaad xaq u leedahay gunno sida lacag -bixinta caymiska nolosha iyo kuwo kale oo badan.
Soo -saareyaasha Shabakadda Madaxa -bannaan waxay kasbadaan celcelis ahaan $ 55/saacaddii.
Waxay yihiin waddammadii ugu Horreeyey ee Lacag -bixiyaha ugu sarreeya ee ku jira liiskan
Heerkaaga khibrad ee horumarinta webka ayaa go'aaminaya sida aad hodan u tahay. Soo -saareyaasha Shabakadda oo loo tixgeliyo inay hodan yihiin, caan yihiin sidoo kale waxay leeyihiin boos muhiim ah adduunka.
Sida laga soo xigtay cilmi -baaris ay samaysay horraantii 2015 koox cilmi -baarayaal ah, 99.99% wax kasta oo ku jira internetka waxay u baahan yihiin adeegyada Horumarinta Webka ama heer Xirfad -yaqaannimo ee Horumarinta Webka.
Soo -saareyaasha Webka ama Barnaamij -sameeyeyaashu waxay kasbadaan wax ka badan xirfadaha qaarkood, run ahaantii, waxay ka mid yihiin shaqooyinka ugu mushaharka badan.
Waa kuwan 10 -ka Horumarineed ee Shaqo ee ugu sarreeya adduunka.
Eeloon Miski. $ 152 Bilyan
Bill Gates. $ 129.3 Bilyan
Mark Zuckerberg. $ 122.9 Bilyan
Larry Ellison. $ 112.4 Bilyan
Bogga Larry. $ 110.8: Bilyan
Sergey Brin. $ 107.3 Bilyan
Paul Allen. $ 20.3 Bilyan
Satoshi Nakamoto. $ 19 Bilyan
Markus Persson. $ 1.8 Bilyan
Robert Nay. $ 2 Milyan
Waxaa loo yaqaan darawalka Tesla, Space x, iyo shirkado badan oo caalami ah, Elon Musk waa ninka ugu taajirsan adduunka iyadoo lagu qiyaasay $ 152 bilyan oo hodan ah marka loo eego barnaamijyada kale ee adduunka.
Saamaynta uu ku leeyahay warshadaha Teknolojiyadda ayaa dalal badan ka abuuray horumar, fursado dhallinyaro ah sidoo kale wuxuu caddeeyay xirfado hufan iyo Khibrad xagga barnaamijyada.
Isagu waa Hormariyaasha Shabakadda Lacag -bixinta ugu sarreeya.
Hantidiisa oo dhan $ 129.3 Bilyan, Bill Gates ayaa aad uga hodansan qaar ka mid ah xirfadleyda dunida ganacsiga. Wuxuu caan ku yahay xirfadaha barnaamijyada.
Isagu waa aasaasaha Microsoft wuxuuna caan ku yahay Philanthropy.
Horraantii 90 -meeyadii, wuxuu abuuray barnaamij dadka ka caawiyay inay adeegsadaan kombiyuutarro shaqsiyeed iyagoon adeegsan xirfadaha koodh. Waa mid ka mid ah barnaamijyada barnaamijyada ugu taajirsan uguna mushaarka badan.
Barnaamij -yaqaan hodan ah, Mark Zuckerberg wuxuu si dhab ah ugu xirnaa adduunka xirfadda leh adduunka. Waa shaqsi caalami ah iyo waliba bilyaneer la ixtiraamo.
Isticmaalka awoodda internetka, Mark wuxuu abuuray aaminaad dhab ah oo ah inuu adduunka ka dhigi karo tuulo caalami ah oo uu sameeyay.
Ma maqashay Oracle? Barnaamij ka dhigaya in macluumaadka si fudud loo heli karo.
XIDHIIDHKA: 10 Injineerada Software -ka Ugu Lacagta Badan Adduunka | 2022
Hagaag, mid ka mid ah aasaasayaasha waa Larry Ellison, cod-qani ah oo u adeegsanaya xirfadihiisa waxtarka dadka oo dhan, ayaa abuuray barnaamijka. Isagu waa khabiirka hogaaminaya koodh -ka iyo laga yaabee inuu ka mid yahay kuwa ugu qanisan adduunka koodh -ka.
Akhri: Sidee Loo Maal Galiyaa Xisaabinta Quantum 2022 | Waxyaabaha Hubaal ah ee ay tahay inaad ogaato
Wax kasta oo IQ ah, waxaa jira wax aadan aqoon. Hagaag, maahan wax walba. Intuusan intarneedka soo gelin, maktabaddu waxay ahayd isha kaliya ee aqoonta.
Larry Page, aasaasayaashii Google waxay arkeen dhinac dhinac ka ah arrintan, way qaadatay, waxayna abuurtay mashiin raadin oo dhammaantood ku qiimeyn kara lammaanihiisa Sergey Brin.
Aasaasaha Google, Sergey Brin waa mid ka mid ah badeecadaha muhiimka ah ee Google.
Noqoshada mid ka mid ah barnaamijyada ugu sarreeya adduunka, Brin iyo Larry waxay ka mid yihiin kuwa ugu taajirsan Barnaamij -yaqaanka iyo kuwa horumariya webka ugu mushaharka badan adduunka oo leh qiime saafiya oo aad u weyn.
Mid ka mid ah aasaasayaashii Microsoft, Paul Allen waa barnaamij -wade, iyo sidoo kale hoggaamiyaha ugu sarreeya dunida xirfadda. Waxa kale oo uu yahay hoggaamiye koodh iyo Barnaamij -wade adduunka oo leh khibrad sannado iyo xirfado faa'iido leh.
Milkiilaha madal horseed u ah crypto ee silsiladda xannibaadda, Bitcoin. Satoshi Nakamoto waxaa loo tixgelin karaa inuu yahay Barnaamij -weyneyaasha ugu weyn adduunka.
Isagoo abuuray lacag ka baxsan xakamaynta dawladda, oo leh balaayiin doolar.
Illaa iyo hadda, aqoonsiga Satoshi Nakamoto lama ogeyn dadweynaha.
Weligaa ma ciyaaray Minecraft? Hagaag, Haddii aadan markaa lahayn, waxaa wanaagsan inaad ogaato in hal -abuurka ciyaarta uu yahay Markus Alexey Persson.
Wuxuu dhashay Juun 1979, wuxuu bilaabay waayo -aragnimadiisa barnaamijka isagoo toddoba jir ah kumbiyuutarka aabbihiis.
Sannadkii 2009, wuxuu dhammaystiray barnaamij la yiraahdo Survival sandbox video game Minecraft wuxuuna iibiyay 40 nuqul toddobaadkii ugu horreeyay £ 10. Sannadkii 2011, Persson wuxuu ka tagay shaqadiisii ​​maalinlaha ahayd si uu diiradda u saaro abuurkiisa si uu uga tago shirkadda MoJang Studios.
Intaa ka dib, MoJang Studios waxaa Microsoft ku iibsatay 2014 $ 2.6 Bilyan.
Sannadka 2020, hantida saafiga ah ee Persson ayaa lagu qiimeeyay $ 1.8 bilyan.
Barmaamuj dhallinyaro ah oo u abuuray barnaamij bilaash ah dadka isticmaala iPhone sannadkii 2010 kaas oo u noqday guul isaga.
Sannado ka dib, Ka dib soo -gaadhista dhabta ah ee adduunka dhijitaalka ah, Robert wuxuu bilaabay inuu bilaabo astaan ​​u gaar ah oo la yiraahdo Ciyaaraha Nay.
Isagu waa mid ka mid ah soo -saareyaasha iyo barnaamijyada web -ka ugu mushaharka badan.
Akhri: 13 Xayawaanada ugu Mushaharka Badan | Dalalka Ugu Fiican
Waa Kuwee Barnaamij -yaasha Ugu Wanaagsan Adduunka
Tim - Berners Lee
Talaabooyinka Ku Noqoshada Horumariyaha Webka ama Barmaamuj
Hel waxbarasho toos ah
Xirfadaha Farsamo ee Leh
Inaad leedahay khibrad aad ku noqoto mid
Samee faylalka faylka ee internetka ah
Wadanka Ugu Fiican Ee Loo Shaqayn Karo Web Developer Ama Programmer.
Xagee Barmaamijyada Ka Shaqeeyaan?
Badankoodu waxay u shaqeeyaan si madaxbannaan. Qaarkood waxay ka shaqeeyaan xafiisyada.
Inaad noqoto Horumariyaha Webka iyo Barnaamij -sameeye waa sida inaad adigu iska leedahay internetka. Waxaad marin u heli kartaa adduunka oo dhan adiga oo eegaya nidaamka oo sameeya yaabab.
13 Xayawaanada ugu Mushaharka Badan | Dalalka Ugu Fiican
10 Kabaha ugu Qaalisan ee Jordan Shoes Sneakers weligood la iibiyay 2022
Intee in leeg ayay Twitch Streamers sameeyaan Bil kasta 2022
Shaqada soo dhawaynta hadda way horumartay, waxayna ka soo baxeen hoose ilaa kuwa ugu mushaharka badan…
21 Shaqooyin oo bixiya $ 25 saacaddiiba 2022 | Lacag Degdeg ah
Ma jiro wax ka badan oo uu shaqaaluhu rabo marka loo eego in uu helo mushahar macquul ah oo guriga la qaato ahaan. Inta badan waxay helayaan…
Paralegals -ku waa noocyo gaar ah oo kaaliyeyaal ah oo leh khibrad shaqo oo aqoon leh iyo shahaadooyin si ay u fuliyaan shaqooyinka qaarkood…